Inongoma FM isizozwakala eMelika – Isambane News
Isambane News Radio sizobe sikwethulela bukhoma inkulumo kamengameli ebhekiswe esizweni kusasa
Home > Featured > Inongoma FM isizozwakala eMelika
Inongoma FM isizozwakala eMelika
September 27, 2016 Isambane News
Isiteshi somsakazo womphakathi sakwa Nongoma eKzn I Nongoma FM etholakala ku 88.3FM senze isivumelwano sokusebenzisana nesiteshi somphakathi sase Melika esibizwa nge KBMF esitholakala ku 102.7FM esisedolobheni I Montana.
Ongu mphathi siteshi se Nongoma FM uMtwana u Sboniso Zulu uthi ukwenza kwabo ubudlelwano nalesi siteshi sase Melika kuzosiza ekuthuthukisweni ezokuvakasha kulendawo ngoba ezinto ezithinta isikompilo labantu abahlala kuyo ezinye zazo zizosakazelwa abantu base Melika.
I Nongoma FM izosakazela bukhoma abantu base Melika uhlelo lwasekuseni I Breakfast show njalo ngolwesithathu phakathi kuka 6 no 8 ngokwesikhathi sase Mzansi okuzobe nguwuLwesine phakathi kuka 10 no 11 ebusuku ngokwesikhathi sase Melika.
I Nongoma FM inabalandeli abalinganiselwa ku 72 000 kanti izwakala ezindaweni ezakhele iZululand KwaZulu Natal.
Basaqhubeka nokubhikisha abafundi
Isimemezelo esibuya eMlamleli Primary School
SAPS ENTRY LEVEL TRAINEE ADVERTISEMENT: 2019
It has come to the attention of this office that there is an advert that is...
Community Announcements Featured Local News